1270nm DFB Coaxial Pigtail Laser Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > Coaxial pigtailed လေဆာ diodes > 1270nm DFB Coaxial Pigtail Laser Diode
Multi-Quantum Well (MQW) Distributed Feedback (DFB) လေဆာ၏ 1270nm DFB Coaxial Pigtail Laser Diode စီးရီးများသည် SONET CWDM ဂီယာ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်များတွင်မြင့်မားသောစွမ်းအားနှင့်ကျယ်ပြန့်သောလည်ပတ်မှုအပူချိန်အကွာအဝေးပါရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ uncooled, hermetically တံဆိပ်ခတ်, coaxial ဖိုင်ဘာ pigtailed packages များအလယ်အလတ် - ရောက်ရှိရန်နှင့်ရှည်လျားသော - ရောက်ရှိ application များအတွက်အမြန်နှုန်းအလင်းအလင်းအရင်းအမြစ်ကိုထောက်ပံ့၏ကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
1270nm DFB Coaxial Pigtail Laser Diode ၏အကျဉ်းချုပ်
1270nm DFB Coaxial Pigtail Laser Diode ၏နိဒါန်း
၃။ အင်္ဂါရပ်များ 1270nm DFB Coaxial Pigtail Laser Diode
Output ပါဝါ 1mW ~ 4mW;
4. 1270nm DFB Coaxial Pigtail Laser Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
1270nm DFB Coaxial Pigtail Laser Diode ၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25âƒ)
အလယ်လှိုင်းအလျား အိုင်စီ PO = PF 1260 1270 1280 nm
၆။ အထုပ်ပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) 1270nm DFB Coaxial Pigtail Laser Diode ၏အဓိပ္ပါယ်။
7. 1270nm DFB Coaxial Pigtail Laser Diode ၏ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 1270nm DFB Coaxial Pigtail Laser Diode, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, အမြောက်အများ, တရုတ်, တရုတ်နိုင်ငံ၌ထုတ်လုပ်သည်, စျေးပေါ, စျေးနိမ့်, အရည်အသွေး